Home Wararka Ganacsato Soomaali oo laga soo masaafuriyay dalka Turkiga
Magaalada Ankara Dalka Turkiga waxaa lagu xiray Ganansato Ajaanib ah oo ay qayb ka yihiin Soomaali, halka albaabada la isugu dhuftay Goobahooda, qaar kamid ah dadkaas ayaa la siiyay halka kuwo kale gacanta laamaha ammaanka ay ku jiraan.
Danjiraha Soomaaliya ee Turkiga Jaamac Caydiid oo la hadlay Universal TV waxa uu sheegay in isbedelka ka dhacay Afgaanistaan uu dhaliyay in culeys Xukuumadda Ankara ay saareen xubnaha mucaaradka si ay wax uga qabato Ajaanibta.
“Waxa aan ka war-helnay olole lagu uruurinayo Ajaanibta Ankara Joogta oo Soomaalidu qayb ka tahay, wixii ka dambeeyay isbedelka Afgaanistan waxaa xoogeystay qabqabashada Dadka aanay u dhalan Dalka, waxaa nala xiray 9-ruux oo 7-kamid ah waa Rag & 2-Dumar ah balse waan ku guuleysanay ugu dambeyn in aan soo deyno” Sidaasi waxaa yiri Danjiraha Soomaaliya ee Turkiga.
Jaamac Caydiid Danjiraha Soomaaliya ee Turkiga ayaa sheegay in sharciga Ganacsatada ay ku furteen Goobahooda uu kahor imaanaya shuruucda dalkaas, balse cabashada Safaaradda ay tahay in keliya dacwo ka qabto xiritaankooda.
“Dadka la xiray waxaa kaararkooda ugu qoran Arday, Caafimaad in uu ku yimid Turkiga, Dalxiis & Diblumaasiyiin, Dowladda Hoose ee Ankara ayaa ku doodeysa in shaqada ay hayaan dadkaan ee ganacsiga iyo kaararkooda iska hor imaanayaan” ayuu yiri Danjire Jaamac Caydiid.
Dowladda Turkiga ayaa Dadka ay xirtay waxa ay u qabatay in 30-Cishe uga baxaan Dalkaas maadaama dastuurka ay jebiyeen, Danjire Jaamac Caydiid waxa uu sheegay in dood sharci looga adkaatay dacwo ka dhan ah xukunka dadkaas ku dhacay sida uu hadalka u dhigay.